IJA 12 တွင် AJA က HDR Image Analyzer 2019G ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC 12 မှာ Aja မိတ်ဆက် HDR Image ကို Analyzer 2019G
IBC 12 မှာ Aja မိတ်ဆက် HDR Image ကို Analyzer 2019G
4K /UltraHD 12G-SDI ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ HDR ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်, IBC ညီလာခံ, 7.C25 (စက်တင်ဘာလ 13, 2019) ရပ် - Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ Colorfront နှင့်အတူပူးပေါင်းတီထွင်၎င်း၏အစွမ်းထက် Real-time HDR ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပလက်ဖောင်းမှ 12G-SDI ဆက်သွယ်မှုဆောင်ခဲ့သစ်ကို HDR Image ကို Analyzer 12G ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အသစ် 4K streamlines /UltraHD နောက်ဆုံးပေါ် High-bandwidth ကို 12G-SDI ဆက်သွယ်မှုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် HDR ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Workflows ။
HDR Image ကို Analyzer 12G 4K ၏ waveform, Histogram နှင့် vectorscope စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကမ်းလှမ်း /UltraHD/ 2K /HD, HDR နဲ့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် WCG အကြောင်းအရာ, Post-ထုတ်လုပ်မှု, QC နဲ့ Master ။ ဒါဟာအစထက်ကျော်လွန်သွား HDR နိုင်စွမ်းမော်နီတာလက်ငင်း features HD ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လိုအပ်ရှိရာနှစ်သက်သော tool ကိုနေရာအပြင်အဆင်ကို configure လုပ်နိုင်စွမ်းများအပြင်၌စုံလင်သောဗီဒီယိုအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုဆက်ကပ်။
"က၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းက HDR Image ကို Analyzer အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Episode စီမံကိန်းများကိုတစ်အရေအတွက် HDR ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ powered သိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနားထောင်ခြင်းအတွက်ကြောင့် 12G ဗားရှင်းကြောင်းအလုပ်ချောမွေ့မယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနှစ် IBC မှာတခုအဖြစ်ဂုဏ်ယူနေသည့် HDR Image ကို Analyzer 12G ဖွံ့ဖြိုးပြီး, "နစ်ခ် Rashby, သမ္မတ, shared Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ.
Aja ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု-သက်သေပြဗီဒီယိုအား I / O နည်းပညာ HDR Image ကို Analyzer 1G အသုံးပြုသူများအ PQ (သိမှုဆိုင်ရာအာရုံ Quantizer) နှင့် Hybrid ကို Log in ဝင်ရန် Gamma (အပါအဝင် HDR ကိုကို formats စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပြည့်စုံ toolset ဆောင်ခဲ့ရန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 12RU ကိုယ်ထည်ထဲမှာ Colorfront ထံမှလေးစား HDR ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး HLG) ။ အပိုဆောင်း feature ကိုပျေါလှငျတို့ပါဝင်သည်:
4K မှတက် /UltraHD အကျိုးရလဒ်များမှတဆင့်ကွင်းဆက်နှင့်အတူ 60G-SDI သွင်းအားစုကျော် 12p,
UltraHD DisplayPort ကျော်ဇာတိ resolution ကိုရုပ်ပုံ display ကိုများအတွက် UI ကို
ဦးစားပေး window တွင်လိုချင်သော tools တွေကိုအားမရများအတွက် Configure လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်အဆင်
တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံကို web UI ကိုကနေတဆင့်ဝေးလံခေါင်သီ configuration များ, နောက်ဆုံးသတင်းများ, သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်စခရင်ပုံလွှဲပြောင်း
Remote Desktop ထောက်ခံမှု
Display ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု SDR (Rec.709), HDR ကို ST 2084 / PQ နှင့် HLG ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရည်ညွှန်း
မြင်ကွင်းတစ်ခုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု ARRI ရည်ညွှန်း®, ကို Canon®, Panasonic က®, အနီေရာင်® နှင့် Sony က® ကင်မရာကိုအရောင်နေရာများ
display နှင့်အရောင်အပြောင်းအလဲနဲ့ lookup ပြုလုပ်နေစားပွဲပေါ်မှာ (LUT) ထောက်ခံမှု
အဆိုပါဆုရ Colorfront အင်ဂျင်အပေါ်အခြေခံပြီးအလိုအလျောက်အရောင်အာကာသပြောင်းလဲခြင်း™
CIE ဂရပ်, vectorscope, waveform နှင့် Histogram ထောက်ခံမှု
အလွယ်တကူအစအဆုံးအကုန်သို့မဟုတ်ရောင်ခြည်ထဲက pixels ကိုဆိုတာတွေ့ရဖို့မမှန်သောအရောင် mode ကို
pixel ရွေးသူနှင့်အတူဒေတာကို Analyzer
တစ်ခုတည်းအလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်လိုင်းပေါ်သို့အတိုးတစ်ဒေသအာရုံစိုက်ဖို့လိုင်း mode ကို
timecode နှင့်အတူ logging file-based အမှား
SDI အော်တို signal ကိုထောက်လှမ်း
HDR Image ကို Analyzer 12G HDR Image ကို Analyzer နှင့် Aja ရဲ့ FS-HDR Real-time HDR / WCG converter သို့ Colorfront အင်ဂျင်™၏ပေါင်းစည်းမှုများလွှတ်ပေးရန်အောက်ပါ, Aja နှင့် Colorfront အကြားတတိယနည်းပညာပူးပေါင်းခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ Colorfront သီးသန့် HDR Image ကို Analyzer နှင့် HDR Image ကို Analyzer 12G များအတွက် Aja ရန်၎င်း၏ Colorfront HDR Image ကို Analyzer software ကိုလိုင်စင်ရထားသည်။
HDR Image ကို Analyzer 12G $ 19995 အမေရိကန် MSRP များအတွက် Aja ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့်ဒီဆောင်းဦးမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အမိန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်: www.aja.com/products/hdr-image-analyzer-12g.
AJA သည် Ki Pro GO H.264 Recorder နှင့် Player ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သည် - ဇွန်လ 16, 2020
AJA နှင့် SKAARHOJ Partner သည် Rack Control Duo နှင့် AJA FS ထုတ်ကုန်များကိုပေါင်းစည်းရန် - ဇွန်လ 5, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော OTT အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: avid ProRes RAW နဲ့ DNx codec ဖြင့် Video တည်းဖြတ် Workflows ဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: Aja IBC 6464 မှာ KUMO 12-2019G မိတ်ဆက်